Sida loo ogaado IMEI-ka iPhone-kaaga | Wararka IPhone
Pablo Aparicio | | iPhone, iTunes, Casharrada iyo buugaagta
Waxaa jira suurtagal inaan u baahanno inaan aqoonsanno aaladdayada moobiilka (ama qof kale). Sideen u qaban karnaa? Waa hagaag, tan, oo tixgelinaysa in baloogga loo yaqaan 'Actualidad iPhone', waxaan u baahan nahay inaan ogaano waa maxay IMEI-ka iPhone-kan. Marka lagu daro habka laga heli karo qalab kasta, Apple wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku ogaanno lambarkan shan siyaabood oo kala duwan.
Lambarka IMEI wuxuu ka kooban yahay a wadarta 15 lambar, tirooyinka qaarkood oo mararka qaar kala fog, kuwaas oo naga caawin kara inaan si fiican u nuqulno. Tirooyinka ka kooban lambar IMEI waxaa lagu helaa iyadoo la isticmaalayo Algorithm Luhn, oo uu abuuray saynisyahan Hans Peter Luhn oo shaqadiisu tahay in laga fogaado khaladaadka aadanaha marka lagu soo bandhigo qaab dhexdhexaad ah, sida qalabka moobiilka. Qodobkaan waxaan isku dayi doonaa inaan ka sifeyno dhammaan shakiga aad ka qabi karto koodhkan muhiimka ah.
1 Waa maxay IMEI?
2 Sida loo ogaado IMEI-ka iPhone-keena
2.1 Laga soo bilaabo dejinta
2.2 Laga soo bilaabo rada lambarka
2.3 Dib u eegista iPhone
2.4 Ka fiiri sanduuqa
2.5 Laga soo bilaabo iTunes
3 Sida loo xiro iPhone-ka IMEI
4 Sida loo furo iPhone-ka IMEI
5 IMEI-ka iPhone-ka ma la beddeli karaa?
Waa maxay IMEI?
Haddii taleefannada gacanta ay leeyihiin taargo, taarikadaas waxay noqon laheyd IMEI-kaaga. Koodhka IMEI ee taleefan (Ingiriisiga Aqoonsiga Qalabka Mobilada Caalamiga ah) waa koodh tilmaamaya aaladda si daah furnaan la'aan adduunka ah, waxaana lagu gudbiyaa aaladda shabakada markii aad ku xirmeyso. Koodhkan waxaa loo adeegsadaa haddii ay dhacdo xatooyo ama lumitaan in meel fog laga xirto qalabka, haddii ay dhacdo tuuggu wuxuu lahaan doonaa qalab aysan isticmaali karin.
Sida loo ogaado IMEI-ka iPhone-keena
Laga soo bilaabo dejinta
Habka ugu fudud ee lagu ogaan karo IMEI-keena wuxuu ka yimaadaa goobaha iPhone-ka. Tan awgeed waxaan aadeynaa Dejinta / Guud / Macluumaad waanan hoos u laabannaa. Waxaan ku arki karnaa IMEI-geena hoosta cinwaanka Bluetooth (iOS 8.4.1).
Soo hel IMEI habkan wuxuu ku leeyahay faaiido kale oo ah, hadaan ku dul ciyaarno ilbiriqsiyo yar, waan nuqulan karnaa oo ku dhajin karnaa meeshii aan doono.
Laga soo bilaabo rada lambarka
Habkani waa la mid waxaa loo isticmaali karaa taleefanka kale ee gacanta. Haddii aan waligaa sameynay oo aan xasuusano, waxaan sidoo kale ku isticmaali karnaa iPhone-keena. Si aad uga ogaano IMEI-gaaga kumbuyuutarka nambarada waxaan sameyn doonaa waxyaabaha soo socda:
Waan ciyaarnay Keyboard.
Waxaan qornaa * # 06 #. Lambarku wuxuu ka muuqan doonaa shaashadda.
Si aan uga baxno, waanu garaacnay OK.
Dib u eegista iPhone
Fudud, laakiin wax ku ool ah. Haddii aan rabno inaan ogaano IMEI-ka iPhone-keena, kaliya waa inaan rogno oo aan eegno farta yarwaxa ku hoos qoran qoraalka ku qoran iPhone. Haddii aan u malayno qalad, waxaan sidoo kale u malayn karnaa in kiiska la beddelay, sidaa darteed habkani ma noqon karo mid la isku halleyn karo sida aan dooneyno illaa aan hubno in IPhone-ka uu had iyo jeer ku jiro gacanteenna.
Ka fiiri sanduuqa
Dabcan markasta ma haysan doonno santuuqa, dabcan, laakiin waa qaab kale oo lagu ogaado IMEI-ka iPhone-keena oo waxtar leh ku imaan kara, gaar ahaan haddii aynaan horteenna haysan. Kaliya fiiri istiikarada dhinaca sanduuqa hoose si aad u ogaato koodhkeena.
Laga soo bilaabo iTunes
Ugu dambeyntii, sidoo kale waan awoodnaa ka hel IMEI-gaaga iTunes. Qaabkani maahan inuu ka dhib badan yahay, laakiin wuu ka waxtar yar yahay maxaa yeelay waxaa lagu arki doonaa dhaqdhaqaaq mana heli doono waqti aan ku tilmaamo ama wax kale. Si aad uga aragto koodhkeena iTunes waxaan sameyn doonaa waxyaabaha soo socda.
Waxaan fureynaa iTunes.
Iyada oo fure ah KONTOROOLKA riixay, waxaan tagnaa liiska iTunes / Ku saabsan iTunes.
Waxaan arki doonaa in xogtayada iPhone-ka ay muuqdaan, iyaga dhexdooda, waxaa jiri doona IMEI.
Digniin ahaan, taas ayaa ku xusuusinaysa lambarkani waa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan qalabkaaga, sidaas darteed uma baahnid inaad siiso qof IMEI ah inay si adag daruuri u tahay mooyee. Dabcan, waligaa ha ku daabicin shabakadaha bulshada.
Sida loo xiro iPhone-ka IMEI
Isticmaalayaashu ma sameyn karaan quful qalab IMEI. Haddii taleefankeena iPhone-ka ah uu lumo ama la xado, waa inaan caawimaad weydiisanaa hawlwadeenadeena. Si tan loo sameeyo, waxaa ugu wanaagsan in la waco, laakiin marka hore waa inaan helnaa IMEI ee qalabka aan rabno inaan xannibo. Sideen ku ogaan karnaa waxa IMEI-geenu yahay haddii aanaan heli karin taleefanka? Waa hagaag, nasiib wanaag, mid ka mid ah hababka lagu ogaanayo IMEI ee iPhone-ka oo aan ku sharaxnay qodobkaan ayaa sharxaya. Kani waa habka lambar 4: waa inaan raadino sanduuqa oo aan eegno warqadda hoose ee salka ku haysa (mar ay jiifto meeshii ay ku jirtay).
Iyada oo IMEI la arki karo, waxaan kaliya leenahay soo wac hawl wadeenadeena oo waxaan kaa codsanayaa inaad xirto taleefankeena. Xaqiiqdii waxay na weydiin doonaan su'aalo qaar si aan u xaqiijino aqoonsigeena iyo inaan nahay milkiilayaasha sharciga ah ee iPhone-ka ee aan dooneyno inaan xannibo, laakiin ma ahan inay dhibaato dhacdo haddii aan runti nahay milkiilayaasha qalabka aan dooneyno inaan xannibo.
Sikastaba xaalku ha ahaadee Raadi iPhone-kaygaKahor intaanan xirin taleefankayga IMEI waxaan isku dayi lahaa inaan helo oo xitaa aan la xiriiro qofka helay. Tan awgeed, waa ku filan tahay inaan tagno icloud.com ama waxaan ka helnaa arjiga qalab kale oo iOS ah. Markaad gudaha gasho waxaan u qaabeyn karnaa sida lumay, ku dar fariin shaashadda qufulka, xanniba ama tirtirno waxa ku jira. Tan ugu fiican, shaki la'aan, waa in la raaco nidaamkan:
IPhone ku rid qaab lumay.
Ku dar fariin shaashadda qufulka. Aad uga taxaddar fariinta. Lagugula talin maayo inaad si aad ah u xanaaq badan, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa in nalaga xaday oo ay tuuri karto, jebin karto ama yaa garanaya waxa kaliya ee naga xanaaqaya jawaab celinta fariinteenna. Waxaan dhigi lahaa wax u eg “Haye, taleefankayga ayaad haysataa. Isoo wacaya. Waad mahadsan tahay ”oo, laga yaabee, u sheeg meesha uu joogo.
Ka yeer. "Taasi waa taas?" Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso, jawaabtuna waxay tahay malaha ciddii haysaa ma oga. Waxay u muuqan kartaa doqon, laakiin nin ayaa qaatay walaalkay ipad tartan isagoo u malaynaya inuu isagu yahay, walaalkay ayaa isoo wacay, waan garaacay oo kii qaatay ayaa ku khaldamay iPad. Wadarta, yaa ku soo laabtay si uu u soo qaado kiisa oo uu uga tago mid uu ku qaatay qalad (loo malaynayo).
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan, qof kasta oo haysta iPhone-keena ayaa horeba taas u og waan ognahay inaad haysatid lambarka taleefankeena iyo meesha uu ku yaalo. Waxaan rajeyneynaa, inaad nagu soo celiso qalabkuna wuu sii shaqeyn doonaa. Haddii aan ka xakameyno IMEI, iPhone wuxuu noqon lahaa miisaan culus oo waraaq ah xitaa haddii ay ku noqoto milkiilaha saxda ah.
Sida loo furo iPhone-ka IMEI
In kasta oo ay aad u yaraatay in telefoon laga iibsado hawl wadeen kasta, dhaqankani wuu sii jiri doonaa. Dad badan oo isticmaala ayaa doorbidaya inay iibsadaan taleefan bilaash ah marka loo eego midka ku xidhan shirkad, maadaama aakhirka aan bixinno lacag badan. Laakiin sidoo kale waa run in, sida dhammaan maalgelinKu tiirsanaanta hawlwadeen si aad u iibsato qalab waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan illaa iyo inta aynaan haysan lacag nagu filan oo aan ku iibsanno hal mar haddii kale waxay noqon doontaa dadaal aad u muhiim ah.
Telefoonadan ayaa badanaa ah ku xiran shirkad waxayna ku shaqeyn doonaan oo keliya kaarka hawl wadeenka ay ku xiran yihiin. Ilaa aynaan sii deyn. Sida xaalada qufulka IMEI, si aad u furto iPhone-ka waxaan sidoo kale u baahan doonaa caawimaad dhinacyada saddexaad. Ikhtiyaar wanaagsan ayaa ah midka waxaan kuu soo bandhigeynaa iPhone News oo ah adeeg LiberaiPhoneIMEI ah. Waa run in aan mar walba xaaqi doonno guriga, laakiin taasi halkan iyo Patagonia, laakiin sidoo kale waa run in qiimaha ugu badan ee lagu furo iPhone-ka uu yahay .9.95 3 halkaanna waxaan ku haysannaa fursad ka raqiisan € 3. Dabcan, illaa intaadan dhib ka qabin inaad sugto illaa XNUMX saacadood si aad u hesho sii deynta.
Si aad u furto iPhone leh LiberaiPhoneIMEI Waxaan kaliya u baahanahay inaan galno IMEI-geena sanduuqa u dhigma oo dhagsii badhanka PayPal, oo noo geynaya koontadayada PayPal si aan u bixinno lacag bixinta. Furitaanku wuxuu dhacayaa muddada aad dooratay. Haddii aad doorato mudnaanta ugu hooseysa ee leh qiime dhan € 6,95, waxaa fiican inaad iska ilowdo illaa seddexda saacadood ka dib lagu muujiyey sicirkaas. Seddex saacadood kadib, waxaan soo bandhigeynaa kaarka howl wade cusub waxaanna hubineynaa in iPhone-keena uu la shaqeynayo SIM shirkad kale ka duwan, sidaa darteed waxaan ogaan doonnaa inay gebi ahaanba bilaash tahay.
IMEI-ka iPhone-ka ma la beddeli karaa?
Haa, laakiin laga bilaabo a nooca hore ee Windows. Maxaan u rabnaa inaan u bedelno IMEI taleefan? Waxaa laga yaabaa inaan dooneyno inaan bedelno lambarkan haddii aan iibsannay iPhone ah kii hore dibedda, maadaama aan wax ku soo iibsan lahayn lambar aan ansax ahayn oo dalkeenna ka jira. Dabcan, kuma talin lahaa inaad taabato wax haddii iPhone uusan wax dhibaato ah na siinin. Taasi waa, waxaan sameyn doonaa "haddii ay shaqeyso, ha taaban."
Beddel IMEI-ka iPhone-ka waa hawl fudud oo lagu kasbaday barnaamijka ZiPhone. Waxaan ku sameyn doonnaa annaga oo ku dhaqaaqeyna tallaabooyinka soo socda:
Waxaan kala soo baxnaa ZiPhone.
Waxaan fureynaa feylka la soo dejiyey tillaabadii hore oo waxaan uga tagnay dusha sare.
Waxaan gujinnaa batoonka Windows Start, fur Run oo ku qor "cmd" iyadoon xigashooyinka la hayn.
Waxaan qornay "desktop cd / ziphone”, Xigashooyin la’aan, goobta baaritaanka oo ku qor Enter.
Waxaan ku xireynaa iPhone-ka kombuyuutarka.
Waxaan ku dhejinay telefoonka qaabka DFU. Tan awgeed, waxaan ku riixnaa batoonka korontada iyo badhanka guriga illaa aan ka aragno calaamadda Apple, ka dibna waxaan sii deynaa badhanka awoodda oo waxaan qabannaa badhanka guriga illaa aan ka aragno astaanta iTunes oo leh fiilada.
Waxaan ku qoreynaa "Ziphone -u -ia 123456789012345" (had iyo jeer bilaa xigashooyin) dalabka taliska. Waa inaan bedelnaa nambarada IMEI ee aan ku dooneyno koodhkii hore.
Waxaan sugeynaa barnaamijka si loo helo faylka zibri.tad oo dib loo bilaabo. Markaan bilowno, waxaan durbaba adeegsan doonnaa IMEI cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iTunes » Sida loo ogaado IMEI-ka iPhone-kaaga
Haddii aad ka saarto saxaaradda halka uu ku kaydsan yahay SIM-ga, waxaad arki doontaa in IMEI-ga iyo nambarka taxanaha ah ee iPhone-kaaga ay ku xardhan yihiin dahab 😀
Ku jawaab helloz
helloz waxay ansax u tahay jawaabtaada sidoo kale IPHONE4
Haye sidee wax yihiin Ma jiraa qof garanaya sida iphone looga saaro kooxda xun? ama miyaad ogtahay haddii wadan kale aad uga bixi karto kooxda xun?
Aad baad u mahadsantahay ma aanan hubin in IMII-ga ku yaal saxanka uu saxan yahay laakiin waan ogaan karay mar kale mahadsanid
Waxaan hayaa iphone 5 waxaan garaacay telefoonka * # 06 # taleefankayga si aan u arko in la jabsaday waxayna muujineysaa 00000000 halkii taleefanka lambarkiisa IMEI ee caadiga ahaa. Ma ii sheegi kartaa waxa ay taasi macnaheedu tahay?
Dib u milicso iPhone-ka
Jawaab José Luis Rozas
Musharaxa Chorrapost ee bisha
Jawaab Pablo García Lloria
Qalabyo badan ayaa IMEI-ga dhabarka kaga yaal. Laakiin waxaan kugula talinayaa inaad adeegsato * # 06 # maxaa yeelay Shiinuhu aad bay waxtar u leeyihiin. Habkaas ayaa ka ammaan badan in la ogaado IMEI-ga dhabta ah ee qalabka.
Jawaab Edwin Azocar G
Saxanka SIM-da, haddii aan la beddelin ...
Ma jiraa qof garanaya sida loo beddelo?
Jawaab Jefferson Dominguez
Sideen ku arki karaa imeikeyga hadii taleefankayga gacanta uu iga lumay oo aanan haysan sanduuqa…. I caawi
Haddii aanan aqoon IMEI-ga iyo qolkayga la xaday. Sideen ku ogaadaa IMEI oo aan u awoodaa inaan taleefanka ka xanibo ama ogaado?
Ku jawaab María Ariza
Sideen ku furi karaa iPad-ka isagoon erey sir ah lahayn?
ama sideen ku ogaan karaa IMEI-ka ipad-ga, anigoo xannibay?
qofna ma i caawin karaa?